Home Wararka Kooxda Farmaajo oo kula qeybsamay Droneskii loo waday Shabaab!
Kooxda Farmaajo oo kula qeybsamay Droneskii loo waday Shabaab!
Xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ahaa taageerayaasha Farmaajo ayaa kashifay dooda dhex martay, kadib markii uu dalka keenay diyaarado Drone ah oo looga shakiyey arrimo amni.
Xildhbaan Zakariye ayaa ku doodaya in diyaaradahan kaliya loo adeegsado beeraha, waraabka iyo buufinta Ayaxa oo laga keenay dalka Turkiga oo ayna suuragal ahayn in diyaarado milateri ay diyaarad soo qaado, kana soo baxaan Garoon diyaaradeed.
Markii ay ciidamada NISA shixnadaasi Diyaaradaha Drone-ka ah ku qabatay Garoonka Muqdisho ayuu sheegay Xildhibaan Zakariye inuu u tegay Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo, balse ay Raggii NISA Wararka ayuu sheegaya badan ku shubeen.
“Markey i celceliyeen NISA ayaan u tegay Madaxweynaha.. waxaa loo sheegay inay Drone-ka uu Shabaab qabsan karo iyo waxyaabo noocaas ah… Madaxweynaha ayaa igu yiri: “Mareykan baa arrinta soo dhex galay..!!, waxaan ku iri: Adigu ma Sirdoonka Mareykanka ayaad u shaqeysaa..?” ayuu yiri Xidhibaan Zakariye Maxamuud.
Wuxuu sheegay isagoo sugaya in Diyaaradaha u sii daayaan lagu bilaabo dagaal, kadibna CBB-da ayaa loo qeybiyey Sawirro lagu eedeynayo iyo warar been ah. “Dagaal bay igu bilaabeen.. aniguna Maxkamadda ayaan ka dacwooday…” ayuuna yiri.
Sababta loo beegsaday ayuu Sheegay Zakariye inay tahay inuu yahay musharax madaxweyne oo aan danbi lahayn oo caan yahay, iyaguna (kooxda Farmaajo) ay ceebo leeyihiin oo uu halis ku yahay, sida uu yiri.